मिठो निद्रा कसरी? | Jukson
गहिरो निद्रा सबै प्राणीको लागि आवश्यक तत्व हो। मानिसलाई उमेर अनुसार दैनिक रुपमा कम्तीमा ६ घन्टा मस्त निद्रा चाहिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा पनि विश्वव्यापी रुपमै मान्छे कम निदाउने वा निदाउन नसक्ने अनुसन्धानहरुले समेत प्रष्ट पारेका छन्। अनुसन्धानहरुले पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणले मानिसको निद्रा विथोलिएको देखाएका छन्। आफ्नै र बाह्य कारणले गर्दा मानिसको निद्रा अनियमित हुँदै गएको छ।
'यदि तपाईं निकै थकित हुनुहुन्छ तर सुतिरहनुभएको छैन, तपाईंले गलत गरिरहनुभएको छ,' अनुसन्धाता भन्छन्। यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरुले निद्रालाई असर पुर्या्इरहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन्ः
सुतिरहेको बेला ब्युझेपछि घडी हेर्ने र निदाउन नसक्ने सबैभन्दा गाह्रो विषय भएको विशेषज्ञहरु बताउँछन्। 'म किन यति चाँडै ब्युँझे? फेरी सुतुँ कि नसुतुँ?', यस्ता प्रश्नहरुले गर्दा मानिसहरुको निद्रालाई असर गर्ने उनीहरुको दाबी छ।
उज्यालो प्रकाशले हाम्रो सुत्ने व्यवहारमा असर गरेजस्तै टेलिभिजन, ट्याब्लेट, ल्यापटप वा स्मार्टफोनको चम्किलो स्त्रि्कनले पनि सुत्ने बानीमा असर गर्छ। यदि तपाईंले टेलिभिजनमा केही हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईंको प्राकृतिक तनावको मात्रा बढाउन सक्छ। विशेष गरी फिल्म वा थि्रलर हेर्दा, त्यसले हाम्रो मानसिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ। स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको पनि त्यस्तै हो। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसले निद्रामा असर गरिरहेको हुन्छ। विशेषज्ञहरु शयन कक्षलाई 'नो टेक्नोलोजी जोन' बनाउने प्रयास गर्न सुझाउँछन्।
- See more at: http://nagariknews.com/health/story/56377.html#sthash.6y5iCn0H.dpuf
शेखर कोइराला भन्छन्- डलरमा बिकेको धर्म कसरी फिर्ता आउला ?
४५० करोडमा बनेको भारतको सबैभन्दा महंगो चलचित्र ‘२.०’ बारे रोचक कुरा
झापा जाँदै गरेको सुमो धनुषामा दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु
दारी ग्याङको ‘मेरो दारी...’ बजारमा